Google Fit: Sida Loogu Qalabeeyo Codsiga Taleefankeena | Androidsis
Sida loo dejiyo Google Fit taleefankaaga Android
Google Fit wuxuu noqday mid ka mid ah barnaamijyada ugu caansan marka la duubayo dhaqdhaqaaqa jirkaaga. Sannadkii hore dalabku wuxuu beddelay qaabkiisa si xagjir ah, oo aad u fudud in la isticmaalo isdhexgalka. Waad ku mahadsan tahay barnaamijka, waxaad awood u leedahay inaad si fudud u xakameyso dhaqdhaqaaqa jirka ee maalinlaha ah, laga bilaabo tallaabooyinka aad qaaddo, ilaa kalooriyada gubatay ama masaafada aad soo martay. Intaas waxaa sii dheer, waa suurtagal iska diiwaangeli jimicsiga isla.
Waa barnaamij aad u faa'iido badan isla markaana in badan oo adeegsadayaashu ay ku fikirayaan inay ku soo degsadaan taleefannadooda. Markaad soo dejineyso markii ugu horreysay, waa muhiim in la habeeyo xog taxane ah, si ay ugu habboonaato adeegsigayaga. Tani waa lagama maarmaan.
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno waa inaan kala soo baxno Google Fit taleefankeena Android. Sida dhammaan barnaamijyada Google, soo degsashadiisu waa lacag la’aan, oo ay u dheer tahay inaadan wax xayaysiin ah ku dhex lahayn. Marka ma lahaan doonno wax mashquul ah markii aan adeegsanayno taleefanka. Haddii aad xiisaynayso, waxaad kala soo bixi kartaa Dukaanka Play-ka cinwaankan:
Google Fit: Diiwaanka Waxqabadka
1 Ku rakib Google Fit on Android
2 Yoolalka maalinlaha ah
Ku rakib Google Fit on Android
Marka Google Fit lagala soo baxo taleefankaaga casriga ah ee Android, mid ka mid ah talaabooyinka ugu horeeya waa inaad ku gasho koontadaada. Waxaan si toos ah ula xiriirin karnaa koontadayada Google, taas oo ah waxa inta badan isticmaalayaashu badanaa sameeyaan. Markaad tan sameyso, waxaa marka hore naloo weydiin doonaa inaan soo galno taxane xog shaqsiyadeed, si aan uga dhex sameysano barnaamijka.
Waxaa nalaga codsaday inaan soo galno dhererka iyo culeyska aan hayno, marka lagu daro taariikhda dhalashada. Mawduuca culeysku waa shay laga yaabo inay daneynayaan, maadaama arjigu leeyahay howl noo oggolaaneysa inaan culeyskeenna gelinno waqti ka dib, si aan u aragno isbeddel ku saabsan arrintan. Marka tani waa xaqiiqo muhiim ah. Waxaa suura gal ah inaadan aqoon miisaanka saxda ah waqtigaas mana lihid miisaan. Waxaad had iyo jeer geli kartaa qiime qiyaas ah oo aad dib u habeyn ku sameyn kartaa mar dambe.
Lagu soo bandhigay xogtaan Google Fit, waxaan horeyba ugu helnay astaan ​​arjiga. In kasta oo aan sidoo kale hayno xog kale oo xog ah oo ku habboon barnaamijka, kuwaas oo muhiim u ah hawlgalkeeda. Waa inaan ku habeeyno xogtan qeybta xigta.
Google Fit wuxuu bilaabayaa tartankiisa sanadka cusub
Yoolalka maalinlaha ah
Google Fit wuxuu ku saleysan yahay yoolal taxane ah oo maalinle ah. Codsiga ayaa tan u qaybiya laba qaybood oo cad, kuwaas oo ah waxa aan aragno markaan galno. Mid kasta oo ka mid ah qaybahan ayaa leh macno ama ujeedo. Sidaa darteed, waxaan kuu sheegi doonaa wax badan oo ku saabsan macnahooda, marka lagu daro sida loo qaabeeyey:
Daqiiqadaha waxqabadka: Waxay ku saabsan tahay waqtiga aan ku bixinayno maalin guuritaanka. Waxqabadka jir ahaaneed ee aan qabanno inta lagu jiro maalinta waa la soo ururiyay, laga bilaabo socodka, orodka ama tababarka ama waxqabadyada aan gacanta ku diiwaangelinno barnaamijka. Ugu talagal ahaan, ugu yaraan 60 daqiiqo ayaa lagu dejiyay qeybtaan.
Dhibcaha wadnaha: Kani waa qeybta labaad, oo aan ku aragno nashaadaadka wadnaheenna garaacaya. Tusaale ahaan, Baaskiil wadista, orodka, socodka degdegga ah, iwm. Xaaladdan oo kale, uguyaraan 10 dhibcood ayaa la dhigayaa.
Waa macquul inay ku xiran tahay howlaha aan raacno maalin kasta, qodobada ama ujeedooyinka lagu aasaasay Google Fit ma ahan kuwo macquul inagu ah. Sidaa darteed, waxaan had iyo jeer haysanaa suurtagalnimada wax ka beddelka arjiga. Sidaas darteed waxaan dejineynaa nidaam ka duwan kan, kaas oo annaga noogu roon ama ka fiican kan ku habboon isticmaalka aan ka sameysanno barnaamijkan maalinteenna nolol maalmeedka.
Google Fit waa la cusbooneysiiyaa iyadoo lagu darayo laylisyada neefsashada iyo aaladaha qalabka shaashadda guriga
Si kastaba ha ahaatee, waa wax aan ku dhisi karno qaab fudud. Si tan loo beddelo, waa inaan gujino oo keliya bogga qodobbadaas. Markaad sidan sameysid, Google Fit wuxuu noo ogolaanayaa inaan wax ka beddelno nidaamka aan ku dhex isticmaalno oo aan ku dooranno midka innaga iyo kiiska noo wanaagsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo dejiyo Google Fit taleefankaaga Android
Sida loo tirtiro barnaamijyo badan hal mar oo ku saabsan Android
Sida loo ogaado haddii aad xaq u leedahay inaad ku ciyaarto Stadia